निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन यस्तो शान्त र सुनसान देखियो काठमाडाैं, हेर्नुहोस २० तस्विरमा — Sanchar Kendra
निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन यस्तो शान्त र सुनसान देखियो काठमाडाैं, हेर्नुहोस २० तस्विरमा
काठमाडौँ । आज भदौ ६ गते अर्थात् सरकार ले निषेधाज्ञा घोषणा गरेको तेस्रो दिन ! काठमाठाैं उपत्यका सुनसान देखियो। शनिबार काठमाडौँको कोटेश्वर, ललितपुरको सातदोबाटो, एकान्तकुना, बल्खु र कलंकी लगाएतका क्षेत्र कतै सुनसान त कति अलिअलि सवारीसाधन ओहोरदोहोर गरेको देखियो ।
राजधानीको कोटेश्वरदेखि कलंकी तथा सोयम्भु पुग्दा सुरक्षाकर्मीले भने बाक्लै रुपमा चेकजाँच गरिरहेका देखिन्थे। सडकमा पैदल यात्रुसमेत अत्यन्त न्यून मात्रमा मात्रै देखिएका छन् । अर्थात काठमाडाैं उपत्यका निषेधाज्ञाले शान्त छ ।
निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर फाट्फुट्ट यात्रा गर्नेहरुलाई पनि तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरुले नियन्त्रणमा लिएर होल्डिग सेन्टरमा राखेको देखिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु/सेवा खरिदको काममा बाहेक कोही पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने भनिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेक सबै व्यापार/व्यवसाय, निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी कार्यालय बन्द छन् । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले भने न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा हिडेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले बुधबार बेलुका १२ बजेदेखि लागु हुने गरी देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । पछिल्लोसमय काठमाडाैंमा हरेक दिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गइरहेका छन्।
शनिबार उपत्यकामा थप २१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमा काठमाडौंमा १६०, ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा ५० जना रहेका छन् । शनिबार देशभर भने ६३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा सुनसरीमा ६ वर्षीया बालिकासहित ९ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा दुईजना, पर्सामा तीनजना, बारामा एक, सिरहामा एक, मकवानपुरमा एक र भक्तपुरमा एक गरी ९ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आज थप ९ जनाको कोरोना भाइरस संकरमणबाट मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन् ।
समिर चन्द सन्चारकेन्द्र डटकमका सिनिएर रिपोर्टर हुन् । आर आर क्याम्पसमा पत्रकारिता बिषयमा अध्यनरत चन्द समसामयिक र राजनीतिक बिषयमा लेख्छन् ।
जनकपुर आइपुग्याे नेपाली रेल, स्थानीय हर्षित, हेर्नुहोस भिडियाेसहित
निषेधाज्ञा खुकुलो भएको दिन यस्तो अस्तव्यस्त देखियो काठमाडाैं उपत्यका, हेर्नुहोस २५ तस्विरमा
निषेधाज्ञाको पहिलो दिन यस्तो देखियो काठमाडौँ, हेर्नुहोस २५ तस्बिरमा
सदरमुकामको सडक चौडा गरिनुपर्ने भन्दै डडेल्धुरामा ‘शव आन्दोलन’, फोटो फिचर
के काठमाडौँमा लकडाउन खुलेकै हो ? सिमसिमे बर्षामा पनि देखियो सवारी जाम, हेर्नुहोस १५ तस्वीरमा
लकडाउनको २५ औं दिन २५ तस्विरमा काठमाडौं- यस्तो देखियो चहलपहल र दर्शनार्थी बिनाको पशुपति